Mamy Ravatomanga : Nangoron-karena be nandritra ny Tetezamita -
AccueilRaharaham-pirenenaMamy Ravatomanga : Nangoron-karena be nandritra ny Tetezamita
14/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Niakatra ambony dia ambony tampoka ny harenan’ingahy Mamy Ravatomanga teo anelanelan’ny taona 2009-2011. Notombanana 60 miliara Ariary ( 21,1 million d’Euros) ny hereny tamin’izany. Io fotoana io ( 2009-2011) dia tao anatin’ny Tetezamita tanteraka isika teto Madagasikara, ka ity mpandraharaha miliardera ity no isan’ny nomen’ny fanjakana Tetezamita tarihin-dRajoelina Andry tombontsoa manokana. Ny orinasa hafa anefa tamin’izany nitotongana sy nanakatom-baravarana vokatry ny krizy. Nanana fahefana goavana mihitsy ingahy Mamy Ravatomanga tamin’izany. Ny bizinesy avo lenta rehetra, dia azy avokoa. Nomena andraikitra ambony izy na dia tsy nanana diplaoma na traikefa mifandraika amin’ilay asa aza. Notendren’ny fitondrana Tetezamita ( Hat) mpikambana tao amin’ny Filankevi-pitantanan’ny orinasa Telma izy tamin’izany , ary afaka nigoaka ny tombontsoa nifandraika tamin’izany. Notendren’ny fitondrana tetezamita ( Hat) mpikambana tao amin’ny filankevi-pitantanan’ny orinasa Jirama ihany koa. Mbola notendren’ny fanjakana Tetezamita mpikambana tao amin’ny filankevi-pitantanan’ny Air Madagascar ihany koa. Ireo tombontsoa manokana sy toerana manokana nomen-dRajoelina azy ireo, dia nahafahan’ingahy Mamy Ravatomanga nangoron-karena haingana. Manginy fotsiny ny resaka andramena. Tsy tambo isaina mantsy ny nitory azy tamin’io resaka andramena io tamin’izany saingy afaka nampiasa ny fahefany foana izy.
Ny dosie lehibe indrindra amin’izany fanararaotana ny toerana maha mpikambana tao anatin’ny Filankevi-pitantanana izany dia ny fanamparam-pahefana nataony tao amin’ny Jirama, ka nampiasainy ny maha mpikambana ao anatin’ny Filankevi-pitantanan’ny Jirama azy, ka nahafahany nisintona 15 miliara hirotsaka tao amin’ny kaontiny. Tamin’ny alalan’ilay orinasa sadasada “Madagascar Utilities” no nanaovany izany, ny faramparan’ny fe-potoam-piasan’ny Tetezamita. Voafindrany vetivety tany amin’ny kaontim-bolan’ny orinasa Mmp Btp (orinasan-dRavatomanga Mamy) io vola io.
Ny volana oktobra 2011 ( mbola nandritra ny Tetezamita) ihany, dia afaka nividy ny orinasa misahana ny fifamoivoizana an’habakabaka TOA (Trans Ocean Airways) koa Ravatomanga Mamy. Nampiasainy koa teo ny fahefana sy ny tombontsoa amin’ny maha mpikambana azy tao amin’ny Filankevi-pitantanan’ny Air Madagasikara. Io orinasa TOA io moa dia natsangan’i Nissat Dandjee ny taona 2002 ary io novidian-dRavatomanga Mamy io. Mpiara-miombon’antoka aminy amin’io koa Naina Andriantsitohaina.
Fa nandritra ny tetezamita iny koa no nahazoan-dRavatomanga an’io tranobe Villa Pradon etsy Antanimena io. Novidiany tamin’ny EEM ny ampahan’ny “action” na petra-bola tamin’io Villa Pradon io, izay mitentina 2,7 tapitrisa Euros tamin’izany.
Talohan’ny fitondrana Tetezamita, na efa nanana orinasa aza ingahy Mamy Ravatomanga dia tsy nisongadina mihitsy izany raha tsy teo iny Tetezamita iny , izay tena nanome vahana azy. Nataon-dRajoelina sy Mamy Ravatomanga tohatra fiakarana fotsiny ny ràn’ireo nitolona ho azy ireo, satria dia ry zareo no nanan-karena sy lasa mpanefoefo tampoka fa ny vahoaka nataony fitaovana nijanona ho vahoaka madinika.
Ireto avy ny orinasan-dRavatomanga amin’izao fotoana : ” Auto diffusion ( orinasa mpivarotra fiara marika Toyota). Ny taona 2003 no nividianan-dRavatomanga Mamy sy José Andrianasolo ny Toyota Sorafils ( an’ny Famille Raboanarijaona). Efa “Commercial” tao moa ny tenany tamin’izany. Ny orinasany manaraka dia ny Smc Presse ( gazety La Vérité, Inona no Vaovao, Ino Vavao faritra), M3tv Mahajanga, Radio Fy ( Itasy) , Alutech Industries (mpiara-miombon’antoka aminy amin’io koa Naina Andriatsitohaina), Azura Fort-Dauphin
( 2010), Azura Foulpointe ( 2015), Madarail ( Hassanein Hiridjee no nivarotra ny petra-bolany tamin’i Mamy Ravatomanga ny 2011), Polyclinique Ilafy, Mmp Btp ( Madagascar Maintenance Pétrolière –Btp), Sci Lam ( 2002), Soadiatrans, Hotel de France ( Mahajanga).
News dans Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet
flexible and greater dans Directe al desirabilite de un nov lingua refusa continuar
News dans Voahangy Rajaonarimampianina-Nandray anjara amin’ny fanadiovana ny Renivohitra
Business Application dans Atsimondrano-BASY KILALAO NANAFIHANA TOKANTRANO
Paradise Slim dans Atsimondrano-BASY KILALAO NANAFIHANA TOKANTRANO
Tena aretin’ny mpitondra sy ny mpanao politika aty Afrika mihitsy ve ity mampaka-bady vaovao ity raha vao mahazo seza na voatendry amina toerana ambony? Maro tamin’ireo mpitondra Tetezamita tokoa mantsy no nisara-bady ary nampiakatra tovovavy ...Tohiny
News: Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We…
flexible and greater: I go to see daily some web pages and blogs to read articles, however this website offers feature…
News: Thanks for helping out, superb info. "Nobody can be exactly like me. Sometimes even I have trouble doing it." by…